Dryfree inta badan iibiya dehydrator, qalajiya qoraxda, mashiinada qalajiyaha bamka kulaylka iyo qoraxda qalajiyaha bamka + kulaylka.
Tamarta Ku Kaydinta Qorraxda kuleylka Qalabka Dhirta Dhirta Kuleylka Qalabka Dhirta
Tamarta Kuleylka Qorraxda kuleylka Hawada Soo Saara Qufulka Cuntada Qallalan
40-60kg Isku-dhafan Qoraaleyda Qoyska
300kg Domestic Solar Heat saar qalajiyaha
800kg Commercial Heat saar qalajiyaha
1500kg kartoo Commercial Dehydrator
Miraha qalalan Oo Dehumidify Machine
Higher Dehumidify Fish qallalan Machine
System ubax qalalan Iyadoo Water Recovery
Tube Paper Industrial Or Wood qallalan Machine
Industrial Dhoobada qallalan Oo Dehumidify Machine
Solar + kaabta Heat saar qalajiyaha Machine
Full-Automatic Heat saar System qallalan
Steam-dhig CPC Solar Oo Heat saar Machine
Solar pv wax soo saar
Fruit qallajinta Machine
Ubax qallajinta Machine
Beeraha Products qallajinta Machine
Machine Dhir qallajinta
Machine qallajinta nuts
Hilibka Products Machine qallajinta
Seafood Machine qallajinta
Industrial Products qallajinta Machine
Heat saar Hilibka qalajiyaha Machine
dehydrator Cuntada chips tufaaxa
Khudaarta Fuuqbaxu Machines
Khudaarta Energy Solar Fuuqbaxu Machines
Commercial Fruit Oo Dehydrator qudaar Machine
qalajiyaha Groundnut beeraha
Groundnut mashiinka qalajinta saaraha
mashiinka qalajinta Groundnut Agricultrual
ADEEGGA DIB-Hantida qalaad
qalajiyaha The nidaamka dib u soo kabashada biyo leeyahay design gaar ah si ay u sii midabka dabiiciga ah ee la qalajiyey isla products.At, oo sugaaya tayada wax soo saarka si ay imtixaanka shaybaarka ee la soo dhaafay la nidaamka dib u soo kabashada biyo standard.The cagaaran cuntada soo kaban karo oo ku saabsan saliidda 40% ka badan ama ka yar lagama maarmaanka ah.
1.Equipment halkii awoodda processing unit in 600-700kg ubaxyo.
Waqti 2.Beerta baaraandegidda qalab kasta waxaa ay gacanta ku 18hours gudahood.
Heerkulka qalajiyo of qalabka 3.Beerta baahan in la waafajiyo dabacsan u dhexeeya 30degrees iyo 65degrees, iyo heerkulka waa in si sax ah ay gacanta ku.
Nidaamka wareegga hawada 4.The dhan kulul qalabka waa in la si cilmiyeysan loogu talagalay si loo hubiyo in wax lagu qalajiyo oo ku labisan dareeska iyo ma laha xagal dhintay.
Gaaska 5.The kulul soo saaray qalab lagu jiro habka processing iyo qallajinta leh qaybaha firfircoon waa in la aruurshey baxay waqtigii xiriir manner.Direct la isu keenida dareere (dareere cell) waxay u baahan tahay isticmaalka qalab bir 304stainless (oo ay ku jiraan saxaarad soo kabasho, biibiile weecinta, haamo biyaha lagu keydiyo, iwm.) si loo hubiyo in cabitaanno ah waxaysidoo aan la wasakheysan.
6.The heerkulka biyaha wareegaya biyo qaboojinta loo isticmaalo condenser qaboojinta waa hoos 15degrees, qoyaan ee gaaska qoyan galaya condenser ku saabsan tahay 50degrees iyo huurka ah waa in ka badan 70% .Waxa qoyaan gaaska ka dib waxaa looga baahan yahay in ay uumiga hoos u dhigay 40% .Waxa ratio dhalidda biyaha ubaxa cusub wuxuu ku saabsan yahay 40%.
Qalajiyaha The nidaamka dib u soo kabashada biyo loo isticmaali karaa in ubax qalalan, khudaar gaar ah iyo caleemo.
(1) Ubax: sida Rose, bamam, lavender, Jasmine, iwm.
(2) khudaarta Gaar ah: noocan oo kale ah sida maalinta u ekaayeen ubax, caleen hooska badan, caleen, reexaanta, iwm.
(3) Dhir: cocos poria, caulis dendrobi, ginseng, iwm.
Rose lagu qalajiyo ee Bulgaria
Bamam qalajiyo ee Guizhou
Previous: Steam-dhig CPC Solar Oo Heat saar Machine
Next: Air qalajiyaha ah midhaha qalajiyo iyo khudaarta / chips muuska mashiinka qalajiyaha
shayga heerkulka sare Mashiinka qalalan dehumidity dhafan bamka kulaylka
Power nooca il 380V / 3N- / 50HZ
kombaresarada awood Input 12HP
brand dooxada wheel ka America
nooca kombaresarada Uubo xiran
Evaporator aluminium Hydrophilic gacmo-bireed
Condenser aluminium Hydrophilic gacmo-bireed
kulaylka qiimeeyo kw 36
hadda lagu qiimeeyo A 18
heerkulka ugu badan / heerkulka qiimeeyo ℃ 85/80
mugga buux refrigerant kg 4.5 * 2
xaaladda heerkulka daarmayaay'e ℃ -60
size Heat bamka ciidankii (mm) 2500 * 1400 * 1500
Heat mashiinka ku xigeenka bamka (mm) /
miisaanka qalabka kg 500
Sawaxanka DB (A) 55
heerkulka ugu badan Qiiqa ℃ 115
kooxda Qiiqa cadaadis MPA ≦ 2,35
taageere socodka Axial Power (kw) 0.75 * 1 / 1.1 * 1
faahfaahinta 380V / 3N- / F500
mugga Air (m3) 10000-15000
heerka biyuhu I
Nooca ilaalinta shoog koronto IP * 4
Size of wadajir ah naxaas /
accessories Standard Waxbarashada / kaarka damaanad / shahaado
1.Providing heerkulka sare waxyaabaha bamka kulaylka ciyaaray by hantida u fiican iyo technology keentay gaar ah.
2.Building dhamaystiran nidaamka taageeraya farsamo iyada oo loo marayo tababar farsamo iyo adeegga la-tashiga.
3.Supporting booqasho soo celinta joogtada ah iyo qorshaha dayactirka.
4.Providing adeeg qof qaraabadaada si gaar ah loo xilsaaray si loo hubiyo in xiriir wanaagsan iyo isuduwidda la macaamiisha.
5.Committing inuu siiyo waqtiga damaanadda saarka free 1 sano oo u dhiganta dayactir.
6.Gradually cilmi baarista iyo horumarinta iyo kor u qaadida wax soo saarka, technology iyo xal.
Dryfree mar walba uu u diyaariyey, waayo, waxaad bixinta adeegga. Waxaan idin siin adeeg qayb firaaqada 24 saac maalintii si aad u soo kaban karo wax soo saarka si dhakhso ah oo waqtigii la rakiban waqtigii bixisey noo by. Waxaan ka bakhaar our in Dongguan on sakhiray hadda samatabbixin karaan xir-caadi ahaan loo isticmaalo waxaan sidoo kale codsan kartaa wakiilka iyo la-hawlgalayaasha ee gobolka kala duwan si ay kaalmo la-iib aheyn ka dib service.We ay si fiican u-soo maray mashruuca ka dib-iibka maamulka adeegga iyo amaanay by macaamiisha.
haybad, waqtiga iyo adeeg ka dib-iibka masuul ka yahay mid ka mid ah hababka mahadnaq brand Dryfree ee.
Dryfree ku siin doonaa adeeg heer sare ah ka dib-iibinta, wax dhib ah maleh sida baahida suuq la bedelo. Marka aad leedahay qalab Dryfree ee, our injineerada adeeg ka dib-iibka siin doonaa damaanad mahadnaq joogto ah aad u maal.
Wangyeda Technopark, magaalada Dongguan, Gobolka Guangdong, Shiinaha.
Link & dhawaaqay
Bay Leaf qallajinta Machine , Rose Water Recovery Qalabka , Rose qalajiyaha , Rose Fuuqbaxu foornada , bamam qalajiyaha Machine , Rose qallalan Machine ,